Xukuumada Abiy Ahmed oo ogolaatay arrin ay muddo ka diidanayd gobolka Tigray | Aftahan News
Xukuumada Abiy Ahmed oo ogolaatay arrin ay muddo ka diidanayd gobolka Tigray
Addis Ababa (Aftahannews)- Xukuumadda Abiy Ahmed ee Itoobiya ayaa si rasmi ah u shaacisay inay gar-gaar bini-aadanimo u dirtay caasimada gobolka Tigrey-ga ee Mekelle, oo maalmihii u dambeeyay laga soo sheegayay xaalado bini-aadanimo.
Xafiiska Ra’iisal Wasaare Abiy Ahmed ayaa sheegay inay kolonyo baabuur ah oo cunto sida u dirtay caasimada Tigrey-ga, si ay wax uga qabato xaalada adag ee ka dhalatay dagaalkii maamulka TPLF iyo dowladda.
“30 baabuur oo kuwa xamuulka ah oo sida 12,500 kiish oo midkiiba 100 Kiiloo yahay ayaa gaadhay caasimada gobolka Tigray ee Mekelle, sidoo kalena waxa wadada kusii jira 7,000 oo kiish oo daqiiq ah” ayaa lagu yidhi qoraal kasoo baxay xafiiska Abiy.
Sidoo kale, waxa lagu wadaa maalinta Sabtida inay gaadhaan gobolkaas daawooyin faro badan oo ay xukuumadda Abiy Ahmed ugu talo-gashay in wax looga qabto xaalada caafimaad ee caasimada, sida lagu sheegay qoraalka xukuumadda.
“Saddex baabuur oo kale oo sida dawooyin ayaa iyaguna gaadhi doona maalinta Sabtida caasimada Mekelle” ayaa lagu yidhi